သငျလကျသီးဆုပျတဲ့အခါ ဘယျလိုပုံစံ ဆုပျသလဲ…? သငျလကျသီးဆုပျတဲ့ပုံစံကပွောပွမယျ့ သငျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထား – Alanzayar
သငျလကျသီးဆုပျတဲ့အခါ ဘယျလိုပုံစံ ဆုပျသလဲ…? သငျလကျသီးဆုပျတဲ့ပုံစံကပွောပွမယျ့ သငျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထား
၁။ စိတျကောငျးရှိသူ- စိတျကောငျးရှိသူတဈယောကျဖွဈတယျ။ ထိလှယျရှလှယျနှလုံးသားရှိတယျ။ လူတှကေို ကူညီတတျတယျ။ ဒါပမေဲ့တဈခါတဈခါ စိတျမရှညျတတျဘူး။တဈစုံတဈယောကျကို မှီခိုခငျြစိတျရှိတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျ့ကိုအလေးထားဆကျဆံတာ လိုခငျြတယျ။ လူအမြားအပျေါ အနဈနာခံတတျလှနျးလို့ အခှငျ့အရေးယူခွငျးကိုလညျး ခံရတတျတယျ။ကိုယျ့ရဲ့ခံစားခကျြကို ထုတျဖျောမပွောတတျတာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့စိတျရငျးအမှနျကို အပွညျ့အဝမသိနိုငျကွဘူး။ အသဈအဆနျးတှကေို လလေ့ာဖို့ အမွဲစိတျအားထကျသနျနသေူတဈယောကျဖွဈတယျ။
၂။ ပြျောပြျောနတေတျသူ- တီထှငျကွံဆအားကောငျးပွီး Talent တဈခုခုကို ပိုငျဆိုငျသူတဈယောကျဖွဈတယျ။လူခဈြလူခငျပေါပွီး ဘယျနရောရောကျရောကျ လိုကျလြောညီထှေ မိတျဖှဲ့ပေါငျးသငျးတတျသူတဈယောကျဖွဈတယျ။ထိလှယျရှလှယျစိတျရှိတယျ။ မြှျောလငျ့ခငျြတာတှရှေိပမေဲ့ ဖွဈမလာတဲ့အခါ နာကငျြရမှာလညျးကွောကျတတျတယျ။အခဈြရေးမှာတော့ လိုတာထပျပိုပွီး တှေးလေ့၊ ခံစားလရှေိ့တာကွောငျ့ ပိုပွီးခံစားရတတျပါတယျ။ဆုံးရှုံးရမှာ ကွောကျပမေယျ့ ဘာမှမဖွဈသလို ဟနျဆောငျပွတတျသူတဈယောကျဖွဈတယျ။
၃။ ခှငျ့လှတျလှယျသူ – ဟာသဉာဏျရှိသူတဈယောကျဖွဈတယျ။ တီထှငျကွံဆစိတျရှိတယျ။ စကားပွောကောငျးတယျ။ လကျတှကေ့ကြတြှေးချေါတတျသူဖွဈပွီး အလှအပ(သို့)အနုပညာရပျတှကေို စိတျပါဝငျစားသူတဈယောကျဖွဈတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ခပျအေးအေးနတေတျသူဖွဈပွီး သငျ့စိတျက နားလညျရ ခကျပါတယျ။ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျတော့ စိတျမနာတတျသေးတာ သငျ့ရဲ့အားနညျးခကျြတဈခုလိုဖွဈနပေါတယျ။ Credit – shwemom
သင်လက်သီးဆုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံ ဆုပ်သလဲ…? သင်လက်သီးဆုပ်တဲ့ပုံစံကပြောပြမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား
၁။ စိတ်ကောင်းရှိသူ- စိတ်ကောင်းရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ထိလွယ်ရှလွယ်နှလုံးသားရှိတယ်။ လူတွေကို ကူညီတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မှီခိုချင်စိတ်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုအလေးထားဆက်ဆံတာ လိုချင်တယ်။ လူအများအပေါ် အနစ်နာခံတတ်လွန်းလို့ အခွင့်အရေးယူခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်မပြောတတ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကို အပြည့်အဝမသိနိုင်ကြဘူး။ အသစ်အဆန်းတွေကို လေ့လာဖို့ အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
၂။ ပျော်ပျော်နေတတ်သူ- တီထွင်ကြံဆအားကောင်းပြီး Talent တစ်ခုခုကို ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။လူချစ်လူခင်ပေါပြီး ဘယ်နေရာရောက်ရောက် လိုက်လျောညီထွေ မိတ်ဖွဲ့ပေါင်းသင်းတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ထိလွယ်ရှလွယ်စိတ်ရှိတယ်။ မျှော်လင့်ချင်တာတွေရှိပေမဲ့ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ နာကျင်ရမှာလည်းကြောက်တတ်တယ်။အချစ်ရေးမှာတော့ လိုတာထပ်ပိုပြီး တွေးလေ့၊ ခံစားလေ့ရှိတာကြောင့် ပိုပြီးခံစားရတတ်ပါတယ်။ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်ပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ပြတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
၃။ ခွင့်လွှတ်လွယ်သူ – ဟာသဉာဏ်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ တီထွင်ကြံဆစိတ်ရှိတယ်။ စကားပြောကောင်းတယ်။ လက်တွေ့ကျကျတွေးခေါ်တတ်သူဖြစ်ပြီး အလှအပ(သို့)အနုပညာရပ်တွေကို စိတ်ပါဝင်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် ခပ်အေးအေးနေတတ်သူဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်က နားလည်ရ ခက်ပါတယ်။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ စိတ်မနာတတ်သေးတာ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ Credit – shwemom
Previous Article ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ချယ်ရီထက် ရယ်။ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး ချယ်ရီထက် ရယ်
Next Article အိုမီခရှနျ-ကိုဗဈပိုးကူးစကျခံရသူမြားအတှကျ အာဟာရဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြမြား